မန္တလေးက တစ်ကိုယ်တော် အာဇာနည်နေ့ကို ကျင်းပသူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မန္တလေးက တစ်ကိုယ်တော် အာဇာနည်နေ့ကို ကျင်းပသူ
မန္တလေးက တစ်ကိုယ်တော် အာဇာနည်နေ့ကို ကျင်းပသူ
Posted by piti on Jul 19, 2011 in Myanma News | 21 comments
ဇူလိုင်လ (၁၉) ရက်နေ့။ အာဇာနည်နေ့။ မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံး မမေ့သင့်တဲ့နေ့တစ်နေ့ပါ။ မနက်ပိုင်းကတည်းက မိုးနတ်မင်းကြီးကတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တကွ အာဇာနည်အပေါင်းကို သတိယလွမ်းဆွတ်လို့ ထင်ပါရဲ့… အုံ့ဆိုင်းမှိုင်းလို့နေတယ်လေ။ ကျနော်လည်း ၁ဝ နာရီထိုးမှ မြို့သစ်ကနေ (၆၂) လမ်းအတိုင်း မြို့ထဲကို ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ကတော့ ငယ်ငယ်က တတ်ရောက်အလေးပြု အမျှဝေခဲ့ဘူးတဲ့ အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနားတွေကို သတိရနေပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့လာခဲ့တာ မနော်ယမန်ပန်းခြံအလွန်လေးလည်ရောက်ရော… လမ်းအနောက်ဖက် ပလက်ဖေါင်းပေါ်မှာ ထူးခြားတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကို အမှတ်မထင်မြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို ရပ်ပြီး သေချာကြည့်မိတော့ ပလက်ဖောင်းဘေးက စတီးလက်ရန်းကလေးပေါ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံကိုချိတ်ဆွဲပြီး အလေးပြုရှိခိုး အမျှဝေနေတဲ့ သူတစ်ဦးဖြစ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကျနော် အံ့အားသင့်သွားမိပါတယ်။ ဒီလို သတိတရရှိတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါသေးလားလို့ပေါ့။
တကယ်တန်းကျတော့ မန္တလေးသားတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ အာဇာနည်နေ့ကို လွမ်းဆွတ်တဲ့စိတ်ရှိကြပါတယ်။ လွမ်းသူပန်းခွေချ အလေးပြု အမျှဝေစရာ နေရာမရှိလို့သာ ဖြစ်မှာပါလေ။ အဲ… အခုတွေ့ရတဲ့သူကတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံရဲ့ရှေ့မှာ ပန်းလေးတွေချိတ်ဆွဲ၊ အမွေးတိုင်ထွန်း၊ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပြီး သေချာကန်တော့အလေးပြုပြီး ငြိမ်သက်စွာနဲ့ အမျှဝေနေတာပါ။ ကျနော်မှာပါလာတဲ့ ဖုန်းလေးနဲ့ အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး ဆက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ကတော့ အဲဒီအလေးပြု အမျှဝေနေတဲ့သူတစ်ယောက် အန္တရာယ် ကင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းမိပါတယ်။
၁၁ နာရီခွဲလောက်ကျတော့ ဘာတွေများ ဖြစ်နေသေးလဲမသိဘူးဆိုပြီး နောက်တခေါက် သွားကြည့်ပါသေးတယ်။ အဲဒီအချိန်အထိ သူက အမျှဝေမေတ္တာပို့နေတုန်းပါပဲ။ မလှမ်းမကမ်းမှာတော့ ရဲကားတစ်စီး ရပ်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဘာမှတော့ မလုပ်ပါဘူး။ နေ့လည်တစ်နာရီကျော်ကျော်လောက်မှတော့ ထပြန်သွားတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တကွ အာဇာနည် ၉ ဦးကို မေတ္တာပို့ အမျှဝေပြီး အလေးပြုခဲ့သူတစ်ယောက်ပါ…….
အာဇာနည်ဗိမာန် မသွားနိုင်လဲ ဗိုလ်ချုပ်ဓာတ်ပုံနဲ့တင် အဆင်ပြေသတဲ့
ဂုဏ်ယူပါတယ်….အနားမှာရှိနေရင် တူတူသွားထိုင်ပြီး ရှိခိုးအလေးပြုလိုက်အုံးမှာ ။။။။။။။။
သူနဲ့အတူတူဝင်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို အလေးပြုသွားကြတဲ့သူတွေ တွေ့ခဲ့ပါတယ်…
ကျနော်တစ်ခုကျန်သွားတယ်ဗျာ… သူအလေးပြုအမျှဝေတဲ့နေရာတည့်တည့် မနော်ရမ္မံ ပန်းဥယျဉ်ထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမြင်းစီးကြေးရုပ်ထုတစ်ခုရှိပါတယ်…
အရင်က ကျုံးထောင့်မှာ ထားတဲ့ဟာပေါ့… အခုတော့ အထည်းကျန်ဆန်စွာနဲ့ ကြေးညှိတွေတတ် အရောင်မှိန်လို့နေပါတယ်…
လေးစားဖို ့ကောင်းတဲ့သူပါ…..အခုခေတ်မှာ ဒီလိုလုပ်တဲ့သူ ရှားနေပါပြီ
နယ်မှာ အလံတစ်ဝက်မချဘူး။ တောက်!!!
မန္တလေးနန်းတွက်က စာသင်ကျောင်းမှာ လည်း အလံတစ်ဝက်ချမထားပါဘူးဗျာ…
စာသင်ကျောင်းအနေနဲ့တော့ ဘာပဲပြောပြော ဂရုတစိုက် အလံအောက်တစ်ဝက်ချ အလေးပြုသင့် ပါတယ်….
This isaVDO link
သူ ့ကို ထရန်လာခေါ်သော သူ အစ်မနှင့်ပြောသော စကားများမှာ…
ဗိုလ်ချုပ်ဆိုတာ ကလေးတွေ သိတောင်မသိကြတော့ဘူး။ မိဘတွေက ဗိုလ်ချုပ် အကြောင်း မပြောပြကြဘူး ။ မိဘတွေ ကိုက အဲလိုစိတ်ဓါတ်တွေမရှိလို ့သားသမီးတွေ မသိတာ..။ ကျွန်တော့် သားသမီးတွေ အဲလို အဖြစ်မခံနိုင်ဘူး..။
နားလည်ရမယ်..ပြောချင်တာပြော​..ကျွန်တော့်ရဲ ့ရည်ရွယ်ချက်က ဗိုလ်ချုပ်ကိုလေးစားရမယ်…​
( အစ်မမှ- နင့်ကို မလေးစားရဘူး မပြောဘူး၊ ကိုယ့်အိမ်ကနေ ကိုယ်လေးစားလို ့..ရတယ်)
ကျွန်တော့်ရဲ ့ရည်ရွယ်ချက် အမှန်အတိုင်းပြောရယင် လူတွေမေ့နေလို ့….။
(အစ်မမှ- ဘယ်သူမှ မမေ့ဘူး..)
အခုလူတွေ…မမေ့ကြဘူးဆိုယင်​.. ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ပြန်ပြီး အလံ တစ်ဝက်ထောင်လို ့ရတယ်..ဂုဏ်ပြုလို ့ရတယ်..။
ဒီလို လက်ဆင့်ကမ်းတာ ညံ့ဖြင်းလာလို ့
တစ်ဖြေးဖြေးနဲ ့တစ်မြို ့လုံး သူများ ကျွန်ဘဝ ရောက်နေတာ…
(အစ်မမှ- သွားမယ်လာ.. ၄ နာရီ မပြည့်သေးဘူးလား..)
ညနေ ၄ နာရီမှ ထမယ်…။
ဒိပြင်နိုင်ငံကလာတိုက်တာလို​ ့သူများလက်အောက်ကျတာ မဟုတ်ပဲ..
ခုတော့ တရုတ် က အကုန်သိမ်းသွားပြီ…။
ဟု အပြန်အလှန်ပြောဆိုတာ ကြားခဲ့ရပါတယ် (ပြောနေတာ တင်ပေးထားပါ့မယ်..)။
သူအစ်မနှင့် အတူ ဦးလေး ဘုန်ကြီးတစ်ပါးလည်း လိုက်လာပါတယ်..။
ဗိုလ်ချုပ်နှင်.တကွ ကျဆုံးလေပြီးသော အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများကို အလေးပြုပြီး
အထက်ပါ ပုံထဲက ရွှေမန်းသား ကိုပါထပ်မံ အလေးပြုပါတယ်ဗျာ
ယခုပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ၂၀၀ရခုနှစ် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး အဦးပိုင်းကာလ တကိုယ်တော် အနစ်နာခံ စွန့်စားပြသွားကြတဲ့ ကိုထင်ကျော်၊ မစုစုနွေး၊ ရေဆင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းအုပ်ဟောင်း ဆရာကြီး ဆလိုင်း (နာမည်မေ့နေတယ်… ဟီး)နဲ့ အခြားအညတရ သူရဲကောင်းများကို အလေးပြုပါတယ်။
တစ်ယောက်တည်း အဖော်မပါဘဲ မိမိဆန္ဒအတိုင်း လုပ်ပြရဲတာ အရမ်းဂုဏ်ယူမိပါတယ်
အင်မတန်မှ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ် ပြင်းထန်သူပါပဲ
တကယ်လေးစားဖို့ကောင်းတဲ့ လူပါပဲ … ။ယုံကြည်ရာကို လုပ်ရဲတဲ့ သတိ္တရှိတဲ့သူပါ … ။ ထိထိမိမိလေး မှတ်တမ်းတင်ပေးထားတဲ့ ပို့စ်ပိုင်ရှင်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက အာဇာနည်နေ့ဆိုတာ အမြဲလိုလို သတိရဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အသက် အရွယ်ရောက်လာတော့ ဒီလို ခံစားချက်တွေကို မေ့တတ်အောင် သင်ပေးကြတဲ့ သူတွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေ သတိရနေရုံလေးပဲ ဖြစ်နေတယ်။ တိုင်းပြည်ကို ကျွန်ဘဝကနေ လွတ်မြောက်အောင် လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်ကို အဲဒီလို မေ့ပစ်ထားခဲ့တာက အရမ်းကို ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းပါတယ်။
ဒီလို တစ်ယောက်ထဲ ကိုယ်လုပ်ချင်တာကို သတိ္တရှိရှိ လုပ်ပြသွားတာ တကယ်လေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်
နောက် မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး အခုလိုတင်ပေးတယ့် piti ကိုလဲ ကျေးဇူးပါ ….
ဓါး (အကျိုးပြုရာတွင်သာသုံးသည်။) says:
ဘယ်လိုမှတော့ မအောက်မေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ ကျွန်တော်သိချင်တာလေးရှိလို့ပါ အဲ့ဒါ ဒီနှစ်အာဇာနည်နေ့ကလား မနှစ်ကလားဆိုုတာသိချင်လို့ပါ အဲ့ဒီပုံနဲ့ သတင်းကို မနှစ်ကလဲတွေ့ဖူးတယ်ထင်လို့ပါ ကျွန်တော့်အထင်မှားချင်လဲမှားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
post တစ်ခုတိုင်းဆီရဲ့ ထိပ်မှာ
post တင်ခဲ့တဲ့ ရက်စွဲကို ကြည့်လို့ရပါကြောင်း
တော်တော်လေးစားဖို ့ကောင်းတဲ ့လူတစ်ယောက်ပါ……